नयाँ वर्ष– २०७७ शुभ होस् - Aksharang
लेख२०७६ चैत ३० आइतबार
अवस्था प्रतिकूल छ । यतिखेर कोरोनाभाइरसको त्रासदिले विश्वभरिका मानव–हृदय हल्लाएको छ । तर हामी त्यही जोश र उमङ्गका साथ नयाँ वर्ष– २०७७ को शुभकामना बाँडिरहेका छौँ । प्रतिकूलताबीच पनि खुृसी बाँड्नु, गहमा आँसु उमारेर पनि वसन्ती मुस्कान पोख्नु हामी नेपालीहरूको स्वभाव हो । सुखमा खुसी त सबैले बाँड्छन्, दुःखमा खुसी बाँड्नसक्नु पो महानता हो । हामी दुःखमा खुसी बाँडिरेहछौँ ।
किनभने प्रतिकूलता कहिल्यै साइत हेरेर आउँदैन । यो खुसीको बेला हो, यो उमङ्ग मनाउने समय हो भनरे विपत्तिले छुट नदिँदो रहेछ । तर यस विपत्तिमा पनि एकअर्काप्रति सद्भावका र सहिष्णुताको भावाभिव्यक्ति गर्नसक्नु हामी नेपालीहरूको नैसर्गिक विशेषता हो । र, हामी यो परिस्थितिलाई यही अस्त्रले पराजित गर्न समर्थ हुनेछौँ ।
हो, यतिखेर घरका भित्ताभित्तामा विक्रम संवत्को नयाँ क्यालेन्डर झुन्डिनुपर्ने हो र नयाँ वर्षको पहिलो सूर्योदयले अर्कै जोस र जाँगर बोकेर आउनुपर्ने हो । आज उत्साहको एक ऐतिहासिक दिन हो । तर यो ऐतिहासिक दिन साँचो अर्थमा उत्साहित हुन मानिरहेको छैन । बरू त्रासदिको नयाँ इतिहासजस्तो भएर आएको छ ।
कोरोनाभाइरसको प्रलयङ्कारी प्रहारले आज विश्व मानवसमुदाय आतङ्कित छ । विश्वलाई इसारामा नचाउँछु भन्ने सर्वशक्तिवान राष्ट्र पनि आज कोरोनाको अघि लाचार भएर घुँडा टेक्न बाध्य छ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा विदेशका कतिपय मुलुकमा जीविकाको सिलसिलामा रहेका नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरू पनि यसको चपेटमा परेका छन् र केही यसको सिकार पनि भएका समाचार सम्पे्रषण भइरहेका छन् । निश्चय नै यस्ता समाचारले हाम्रो मन कहालिएको छ र हाम्रा आँखा रसाएका छन् । यो हामीले नसुन्नुपर्ने समाचार हो तर प्रकृतिको नियमलाई मानिसले कहाँ बदल्न सकेको छ र ! सत्य जति नै र अप्रिय र तीतो भए पनि सत्य आखिर अपरिवर्तनशील छ । हामीले त्यसलाई सुन्ने पर्छ, व्यहोर्नै पर्छ ।
वर्तमान हामीसामु एउटा कठोर चुनौती भएर उभिएको छ । तर हामी अनेकौँ बालखण्डमा थरीथरी चुनौतीहरूसँग लड्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र हरेक चुनौतीहरूसँग लड्न अभ्यस्त भइसकेका छौँ । त्यसैले हामी यस चुनौतीको पनि सामना गर्ने छौँ र कोरोना भाइरसलाई परास्त पार्नेछौँ । हाम्रो यो प्रण हो, सङ्कल्प हो ।
कोरोना एउटा कलङ्क हो र अभिशाप पनि । यसले हामीबीचको सम्बन्धलाई पनि विखण्डित पारेको छ । तर यसले हामीबीचको भौतिक दूरीलाई तन्काउन खोजे पनि हामीभित्र रहेकोको प्रेम, सद्भाव र सहिष्णुता त हृदय र स्पन्दनजस्तै हुन् । यसलाई कुनै भाइसरले विभाजित गर्न सक्तैन, विखण्डित गर्न सक्तैन ।
जे–जस्तो प्रतिकूलता आए पनि, विसङ्गति र विपत्तिले जति क्रूररूपमा प्रहार गर्न खोजे पनि नयाँ वर्षले हाम्रो घर–आँगनमा नयाँ उत्साह बोकर पाइला टेकि नै सकेको छ । दुःखेको घाउमा मल्हम भएर आएको छ । यसलाई हामीले स्वागत गर्नैपर्छ ।
अपेक्षा र विश्वास हामीसँग अझ पनि जीवन्त छ । विश्वास गरौँ– यो कहर लामो समयसम्म रहँदैन । यसको अन्त्य अवश्यंभावी छ
तसर्थ नयाँ वर्ष २०७७ लाई हामी त्यही खुसी र उमङ्गको मुस्कानले लिपेका ओठहरू र त्यही सद्भाव एवम् सदिच्छाले स्पन्दित भएको हृदयले स्वागत गरौँ ।
यस घडी सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति कोरोना–कहरबाट सुरक्षित रही सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनको यात्रा अविराम होस् भन्ने सदिच्छा साथ अक्षरङ्ग परिवार नयाँ वर्ष २०७७ को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ !
देवभूमिको एउटा चित्र